विद्यालय सप्रर्न के गर्नुपर्छ ?
देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटिरहेका तथ्यांक आइरहेका छन् । तर, त्यो तथ्यांक रामेछाप सदरमुकाम मन्थली माविको हकमा मिथ्यांकजस्तो लाग्छ । यसले विद्यार्थी र अभिभावकको दुवैको विश्वास कति जितेको छ भने नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै प्रधानाध्यापक टंकप्रसाद दाहाल विद्यार्थीको चाप कसरी थेग्ने
निजी विद्यालयको शुल्क वृद्धि फिर्ता हुँदैन्ःप्याब्सन
काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष विजय साम्बाहाम्फेले निजी विद्यालयहरुले बढाएको शुल्क फिर्ता नहुने बताएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम नै निजी विद्यालयहरुले शुल्क लिएको दाबी गर्दै कुनैपनि हालतमा शुल्क फिर्ता नहुने उनले बताए । हामीले शिक्षा नियमावलीको
झोले क्याम्पस खारेज गर्दै त्रिवि
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले सम्बन्धन लिएका तर सञ्चालनमा नरहेका ‘झोले’ क्याम्पस खारेज गर्ने भएको छ । कान्तिपुरका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत आएका उजुरीमाथि त्रिविले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो । त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयले
काठमाडौँ। नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को अध्यक्षमा विष्णुहरि पाण्डे निर्वाचित भएका छन् । शनिबार सम्पन्न निर्वाचनमा सरोजकुमार बस्नेतलाई १२ मतको अन्तरले पराजित गर्दै पाण्डे अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। महासचिवमा पाण्डे प्यानलका शेषराज भट्टराई विजयी भएका छन् । नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाण्डेले
त्रिविका सबै आंगिक क्याम्पस र कार्यालयमा विदा
काठमाडौँ ६ वैशाख । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका सबै कार्यालय र आंगिक क्याम्पसहरू आज बन्द छन् । पूर्वरजिष्ट्रार निलकण्ठलाल श्रेष्ठको निधनको शोकमा विश्वविद्यालयले सबै आंगिक क्याम्पस र कार्यालयहरूमा बिहीबार एक दिन विदा दिएको हो । श्रेष्ठको गत चैत ३० गते निधन भएको थियो । रजिष्ट्रार कार्यालयले
अस्थायी शिक्षक परीक्षाको नयाँ मिति घोषणा छिट्टै: शिक्षामन्त्री
काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले छिट्टै अस्थायी शिक्षकहरूका लागि आन्तरिक परीक्षाको नयाँ मिति तय गरिने बताएका छन् । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले आयोजना गरेको एक दिवसीय शैक्षिक कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले पहिले खुला विज्ञापन गर्ने कि आन्तरिक भन्नेबारे मन्त्रालय छलफलमा
अब दुई दलित विद्यार्थीको अभिभावक प्रधानमन्त्री ओली !
लहान ५ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिरहाका दुई दलित विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका छन् । विद्यालय भर्ना अभियान २०७५ अन्तर्गत आज सिरहाको कल्याणपुरस्थित रामदुलारी माविमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली रुपाकुमारी खत्बे र पवन मरिक डुमको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै ती विद्यार्थीलाई
शुल्क फिर्ता नगरे आन्दोलन थाल्ने विद्यार्थी संगठनको चेतावनी
काठमाडौं । शैक्षिक शत्रको शुरूमै निजी विद्यालयले अभिभावको ढाँड सक्ने गरि मनोमानी शुल्क बढाएको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शुल्क फिर्ता नलिए आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले निजी विद्यालयले अभिभावकबाट अनुमोदन नगरि एकतर्फी रूपमा शुल्क बढाएको आरोप लगाएका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स
आमा सम्झँदै चित्रबहादुर केसी: ‘बेचेर घर आउनू भन्दै आमाले ढुंग्री पठाइदिनुभएछ’
त्यतिबेला छरछिमेकमा मात्रै होइन, बाग्लुङ जिल्लामै खासै विद्यालय थिएनन् । शिक्षक पनि थिएनन् । केही वेदचण्डी पढाउने भाषा पाठशाला भएपनि नजिक थिएनन् । अक्षर चिनेकाहरुले अरुलाई पनि अक्षर चिनाउथे । उहाँले पनि काठको कालोपाटीमा कालो अंगारले रंगाएर खरी ढुंगाले लेखेर अक्षर चिन्नुभयो । ‘मैले कुटी बनाएर साधुको
ह्याप्पी होमले मनायो अभिभावक दिवस
काठमाडौँ । जोरपाटीको ह्याप्पी होम स्कुलले आफ्नो छैठौं अभिभावक दिवस तथा दीक्षान्त समारोह आयोजना ग¥यो । यस अवसरमा नानी बाबुहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाए । विद्यार्थीले नाटक, गीत, नृत्य लगायत देखाएका थिए । कुमारी नृत्य, विभिन्न जातजातीका पहिरन झल्कने फेशन शो जस्ता क्रियाकलाप गरेर बालबालिकाले आफ्नो प्रतिभा
सुटुुक्क तोडियो अस्थायी शिक्षकको आमरण अनशन
काठमाडौँ । अस्थायी शिक्षकहरुको भद्रकालीको आमरण अनशन बीचमै तोडिएको छ । अस्थायी शिक्षकहरूले सुटुक्क अनशन तोडेका हुन् । चैत २३ को परीक्षा स्थगित गर्नेलगायतका माग राखि छुट करार अस्थायी शिक्षक र विद्यार्थीहरु अनशन बसेका थिए । आयोगले परीक्षा स्थगित गर्न साथै विद्यार्थीहरुले अनशन तोडेपनि अस्थायी शिक्षकहरू
स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूद्वारा पशुपति क्याम्पसमा तालाबन्दी
अमरवाणी संवाददाता /काठमाडौँ । स्नातकोत्तर तह प्रथम र द्वितीय सत्र प्रणाली (सेमेस्टर) मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेका छन् । शैक्षिक शुल्क घटाउनुपर्ने र सेमेस्टर प्रणलीमा हुनुपर्ने शैक्षिक पूर्वाधारहरूको माग राखेर विद्याथीहरूले मंगलबार क्याम्पस प्रमुख र सहायक
एसईई परीक्षा आजदेखि
काठमाडौँ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को यस बर्षको परीक्षा आज देखि सुरु भएको छ । पहिलो दिन आज अनिवार्य अंग्रेजी र वेद विद्याश्रम तर्फ अनिवार्य संस्कृत भाषा र साहित्यको परीक्षा हुँदै छ । यस बर्षको परीक्षामा सहभागी हुन देशभरबाट ४ लाख ८५ हजार ५ सय ८६ परीक्षार्थीले फारम भरेका छन् । परीक्षा सञ्चालनका
गिरिजाबाबूसँग पहिलो भेटमै विश्वस्त भएः प्रचण्ड
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइराला मुलुकको गणतन्त्रको सुत्राधार भएको बताएका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आठौं स्मृतिका अवसरमा जीपी कोइराला मेमोरिय क्याम्पसले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले कोइराललाको राजनीतिक व्यक्तित्वको
काठमाडौँ, चैत ६ गते । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन आन्तरिक परीक्षाको तयारीमा शिक्षक सेवा आयोग जुटिरहेका बेला असन्तुष्ट शिक्षकले पुनः आन्दोलन थालेका छन् । विगतको सहमति र रोजगारीको हकअनुसार कार्यरत सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउने गरी विज्ञापन नगरिएको जनाउँदै अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति र पुनरुत्थान
जिल्ला शिक्षा कार्यालय तत्काल खारेज हुँदैन : शिक्षामन्त्री
काठमाडौँ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू तत्काल खारेज नहुने भएका छन् । आगामी चैत्र २८ गतेपछि जिल्ला शिक्षा खारेज हुने भनिएपनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल जिल्ला शिक्षा खारेज नगरिने जनाएको हो । एकीकृत अखिन नेपाल शिक्षक संगठनले सोमबार आयोजना गरेको सम्मान कार्याक्रममा बोल्दै शिक्षा, विज्ञान
शिक्षक नियुक्ति गर्न स्थानीय सरकारलाई कानुन वाधक नबन्ने
काठमाडौं / सामुदायिक विद्यालयमा अस्थायी वा करार शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारसँग रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताएका छन् । देशभरका ७७ जिल्लाका ७५३ ओटै निकायले नगर÷गाँउ शिक्षा समिति गठन नगर्दा कतिपय विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिमा समस्या आएको भन्दै सबै
पत्रकारिता विषयमा पूर्णाङ्कभन्दा बढी नम्बर !
काठमाडौँ । आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयमा कतिपय शिक्षकले पूर्णाङ्कभन्दा बढी अङ्क दिने गरेको पाइएको छ । कक्षा ११ र १२ मा आमसञ्चार विषय पढाउने शिक्षकका लागि मङ्गलबार आयोजना गरिएको ‘प्रयोगात्मक परीक्षासम्बन्धी अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीहरूले सो विषयमा २० पूर्णाङ्कको
कक्षा ११ र १२ को प्रश्नपत्र छपाइ शुरु
भक्तपुर । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ र १२ को परीक्षाका लागि परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको छ । परीक्षाका लागि देशभर एक हजार ४९ केन्द्र निर्धारण गरेको बोर्डका प्रवक्ता तथा उपनियन्त्रक जयन्ती सत्यालले जानकारी दिए । बोर्डले गत वर्ष ९९२ वटा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेकामा यस वर्ष भने ५७
शिक्षा नीति नै खराब : अध्यक्ष दाहाल
चितवन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अबको शिक्षालाई रोजगारमूलक, उत्पादनमूलक र समुदायको हितसँग जोड्ने खालको बताएका छन् । नारायणी विद्यामन्दिर माध्यमिक विद्यालय, शिवनगरको ५४औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिलेको शिक्षा बेरोजगार उत्पादन गर्ने
अस्थायी शिक्षकको परीक्षा चैत्र २३ गते गर्ने आयोगको निर्णय
भक्तपुर । शिक्षा ऐन नवौं संशोधन अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको परीक्षा मिति तोकेको छ । पटक–पटक मिति तोकेर पनि स्थगित हुँदै आएको परीक्षा चैत २३ गते शुक्रबार गर्ने आयोगले निर्णय गरेको अध्यक्ष ताना गौतमले जानकारी दिए । उम्मेदवारहरूको स्वीकृत नामावली आयोगको वेवसाइटमा राखिएको छ । परीक्षा
शिक्षा पत्रकार समूहमा नयाँ कार्यसमिति
काठमाडौं ५,फागुन । शिक्षा पत्रकार समूहमा रोश्ना सुब्बाको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । समूहको शनिवार सम्पन्न १८ औं अधिवेशनले १३ सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्षमा शेषकान्त पण्डित,महासचिव चन्द्र बानियाँ,सचिव तुला अधिकारी कोषाध्यक्षमा श्याम तन्डुकार रहेका छन्
काठमाडौ । विश्व यो वा त्यो निहुँमा अशान्त छ । कतै न कतै युद्ध भएका छन् । द्वन्द्व भएका छन् । हिंसा भएका छन् । ति हिंसाको शिकार हुने मध्येमा पर्छन् बालबालिका । विश्वमा भइरहेका यस्ता समस्यालाई बालबालिकाले कसरी लिएका छन् ? यही विषयमा छलफल गर्न अक्षरा स्कुलका विद्यार्थीले राष्ट्र संघले कसरी काम गर्नु पर्छ भनेर
विलासी गाडी मोहमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, विद्यार्थीद्वारा केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी
चितवन - रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले विलासी गाडी खरिद गरेको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलमा उत्रिएका छन्। विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सामग्रीको अभाव, प्रयोगशाला, पुस्ताकालय भवन जीर्ण हुँदा पनि पदाधिकारी भने विलासी गाडी खरिदमा लागेको आरोप लगाउँदै नेपाल विद्यार्थी संघ आन्दोलमा
कक्षा ११को नतिजा सार्वजनिक,नतिजा ग्रेडिङ प्रणालीमा
२९ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११को नियमिततर्फको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार बेलुकी एक सूचना जारी गर्दै बोर्डले परीक्षाको नतजिा सार्वजनिक भएको जनाएको छ । नतिजा ग्रेडिङ प्रणालीमा सार्वजनिक भएको हो । बोर्डले असार १ गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । परीक्षामा ३ लाख ४७ हजार ७४८
शिक्षा नै राष्ट्रको सम्पत्तिःप्रधानमन्त्री देउवा
भीमदत्तनगर, २९ पुस । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले लागू गरेको नीतिका कारण प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताएका छन् । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा शनिवार सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको प्रथम दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री
कपन बहुमुखी क्याम्पसमा प्रथम वर्षका विद्यार्थीलाई स्वागत
काठमाडौं २१, पुस सुमन लामा कपन बहुमुखी क्याम्पसले स्नातक तह प्रथम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि स्वागत कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । बिहीबार सो क्याम्पसमा अध्ययनरत स्नातक तह दोस्रो र तेस्रो बर्षका विद्यार्थीहरुले प्रथम वर्षका नव आगन्तुक विद्यार्थीहरुलाई स्वागत गरेको हो । शिक्षाशास्त्र र वाणिज्यतर्फ
कुल पोष्ट : 129